Factory Tour - Shandong Zhongtian mejupụtara Ihe Co., Ltd
Gi-galvanized ígwè eriri igwe
GL-Galvalume ígwè eriri igwe
PPGI-Prepainted ígwè eriri igwe
PPGL-Prepainted ígwè eriri igwe
Oyi akpọrepu Steel Onodi
Oyi akpọrepu coils na-emepụta na elu na-agba 6Hi Rolling mills na-sopplied site anyị na ma zuru ike na annealed condition.Superior elu àgwà nke oyi coils ekwe obosara ngwa dị ka mkpụrụ maka metal mkpuchi (galvanized) galvalume, akụrụngwa n'ihi ọjà, akpa, drum / ụzọ / metal ngwá ụlọ na ndị ọzọ n'ozuzu engineering eji.
Hot tinye Galvalume ígwè Onodi
Galvalume ígwè eriri igwe bụ ngwaahịa nke dị yiri nnọọ kpaliri ígwè ma na mma corrosion na-eguzogide (ruo ugboro 3 ndụ nke galvanized) .Okwu supperior Njirimara nke galvalume ibili si pụrụ iche mejupụtara (43.5% Zn, 1.5% Si, 55% AL ) nke dara mkpuchi. Ngwa gụnyere roofing isi ihe onwunwe n'ihi na tupu-sere.
Hot tinye galvanized ígwè Onodi
Kpaliri Steel Coils na-emepụta site na a usoro nke metal mkpuchi nke na-agụnye na-agafe oyi akpọrepu coils site a ketulu nwere wụrụ awụ zinc. Usoro a ana achi achi adhesion nke Zinc ka elu nke ígwè mpempe akwụkwọ. The Zinc Layer-enye magburu onwe corrosion-eguzogide ma na ogologo ọrụ ndụ. Hot itinye galvanized ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ezinụlọ ngwa, iga, akpa n'ichepụta, roofing, isi ihe onwunwe n'ihi na tupu-sere, ducting na ndị ọzọ na-ewu metụtara ngwa.
Agba ntekwasa ígwè Onodi
Nga-ese coils na-emepụta site na mkpuchi a oyi akwa nke agba n'elu oyi akpọrepu, kpaliri ma ọ bụ galvalume coils. Aesthetic mkpesa na anwụ ngwa ngwa bụ isi atụmatụ nke na agba ntekwasa ígwè coils. A dum nhọrọ nke na agba dị ka ndị ahịa na ágbá e mere iji gboo kpọmkwem ọgwụgwụ pụrụ iji kpọmkwem. Anyị tupu ese coils na-adabara kpọmkwem n'ime ime dị ka nke ọma dị ka mputa ngwa, bred ogwe na na.
Corrugation Onodi-corrugated roofing mpempe akwụkwọ
Nkwakọba na Mbupu
Okwu: Guan County New Century Industry Park, Liaocheng, China